एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड र CAS Trading House Pvt. Ltd बीच End to End Loan Management System and Document Management System खरिद गर्ने सम्झौता २०७६ माघ गते सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकको तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री रोशन कुमार न्यौपाने र CAS Trading House Pvt. Ltd. का तर्फबाट कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक श्री उमेश लाल श्रेष्ठज्यूले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
सो सम्झौताअनुसारCAS Trading House Pvt. Ltd.ले एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको Newzen End to End Loan Management System and Document Management Systemसफ्टवेयर उपलब्ध गराउनेछ । उक्त सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा आएपछि बैंकको आन्तरिक कर्जा व्यवस्थापन प्रणाली र अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली थप सहज हुने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
यस सफ्टवेयरले ग्राहक कर्जा प्रदान प्रक्रियालाई पनि सहज बनाउनेछ । यो सिस्टमले गर्दा ग्राहकलाई सेवा उपलब्ध गराउने आन्तरिक समय घटाउने हुँदा ग्राहकहरुले छिटो छरितो सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ । यसैगरी यो सफ्टवेयरले अभिलेख रेकर्डिङ्ग, व्यवस्थापन, पुनप्र्रयोग र पुनःप्र्राप्तिमा समेत सहयोग गर्नेछ । यसले अभिलेख दोहोरिने समस्यालाई पनि निवारण गर्ने विश्वास बैंकले लिएकोछ । , म्यानेजमेन्ट, रियुज र रिटरभलमा सहयोग गर्नेछ । यसले गर्दा डकुमेन्ट डुप्लिकेशनलाई पनि निवारण गर्नेछ । यो सफ्टवेयरलाई बैंकको Omni channel based digital banking system सँग जोड्दा गर्दा ग्राहकहरुले digital banking service को उच्चतम लाभ उठाउन सक्नेछन् ।